के हाे टन्सिल ? टन्सिलबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरायसी औषधि – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /Intresting/के हाे टन्सिल ? टन्सिलबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरायसी औषधि
टन्सिलका कारण तपाईले धेरै दुख पाउनु भएको होला । मौसममा आउने परिवर्तन पछि रुघा लाग्ने र टन्सिल हुने सामान्य जस्तै भएको हुन्छ । सामान्यता मौसममा आउने परिवर्तनका साथै चिसो तातो खान आदीका कारण टन्सिल हुने गर्छ । टन्सिल भएसँगै खान र पिउन निकै समस्या पर्छ । राम्रोसँग खान र पानी निल्न पनि नसक्ने भएपनि खानपानमा समस्या नपर्ने कुरै भएन। टन्सीलबाट दुख पाएर मानिसहरु मेडिकलबाट विभिन्न खालका औषधि ल्याएर खाने गर्छन् । तर टन्सिलको उपचारका लागि घराउसी विधिले निकै फाइद पुग्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
बेसार,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
चिकन सूपमा सोडियमको मात्रा धेरै हुन्छ । यो सू्रपमा कयौं पोषक तत्वपनि पाइन्छ । टन्सिल भए खाना खानसकिँदैन । जसका कारण शरीरमा भएको पोषक तत्वको कमीलाई चिकेन सुपले पुरा गर्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,